Tutorial Anaconda: Python ho an'ny fianarana milina sy siansa momba ny angona - Ikkaro
firosoana >> Software >> Linux >> Tutorial Anaconda: Inona izany, ny fomba fametrahana azy ary ny fampiasana azy
Ato amin'ity lahatsoratra ity avelako a Torolàlana momba ny fametrahana Anaconda sy ny fomba fampiasana ny fitantanana fonosana Conda anao. Amin'izany isika dia afaka mamorona tontolon'ny fampandrosoana ho an'ny python sy R miaraka amin'ireo tranomboky tadiavintsika. Tena mahaliana ny manomboka mikorontana amin'ny Learning Machine, ny fandalinana ny angona ary ny fandaharana amin'ny Python.
Anaconda dia fizarana maimaimpoana sy loharano mivelatra amin'ny fiteny fandaharana Python sy R izay be mpampiasa ao informatika informatika (Science Science Data Data, Learning Machine, Siansa, Injeniera, analytics mialoha, Big Data, sns).
Mametraka rindranasa be mpampiasa be mpampiasa ao amin'ireto taranja ireto indray mandeha izy, fa tsy mila mametraka azy ireo tsirairay. . Mihoatra ny 1400 ary izany no be mpampiasa indrindra amin'ireny taranja ireny. Ohatra vitsivitsy
Fotoana kely lasa izay dia nametraka aho Keras sy TensorFlow bareback fa ny vahaolana Anaconda dia toa tsotra kokoa ary ilaina kokoa
Izy io koa dia a Safidy mahafinaritra hametrahana Python ao amin'ny rafitry ny fiasanay miaraka amin'ireo trano famakiam-boky ilaintsika ary ampiarahany aminy ireo tetikasa amin'ny tontolo virtoaly samihafa.
Izaho dia mizaha toetra azy manokana amin'ny script sasany hitantanana csv lehibe ho an'ny asa ary ilako NumPy sy Pandas. Ary izao aho hanandrana ny Tensorflow sy zavatra hafa ;-)
Ny zavatra hitako amin'ny isan'ny fonosana hitako dia tsy voafetra amin'ny famakafakana data satria afaka mametraka plugins (tranomboky) an-jatony natokana ho an'ny fampandrosoana web na fanesorana toa an'i Scrappy izahay. Noho izany dia mandeha amin'ny fampianarana ankapobeny ny fametrahana sy ny famoronana tontolo iainana izahay ary hanadihady ireo rindranasa azontsika apetraka.
Andininy. Aza afangaro Anaconda, izay efitrano mamela antsika hampiasa tranomboky maro sy lozisialy Data Data, lozisialy Data Data sy Learning Machine miaraka amin'i Conda, izay mpitantana fonosana Anaconda sy tontolo virtoaly.
Ahoana ny fametrahana Anaconda amin'ny Ubuntu
Anaconda dia azo apetraka amin'ny Microsoft, MacOs ary Linux. Holazaiko aminao ny zavatra niainako tao Ubuntu.
Misy fomba samihafa hametrahana Anaconda ao Ubuntu, ny iray tiako indrindra dia ny mankany amin'ny tranonkala ofisialy ary to download ny .sh. Tadiavo ny rafitra fiasanao sy ny kinova izay mahaliana anao
Raha manomboka ianao dia mandrisika anao hisafidy ny kinova 3.7 fa ho lany andro ny 2.7 afaka taona vitsivitsy.
Raha misintona ny .sh ho an'ny linux toa ahy ianao dia mila manokatra ny console na terminal, ary mankanesa any amin'ny lahatahiry misy azy, raha amiko. Downloads
Aza adino fa ny lesoka mahazatra indrindra ananan'ny olona dia ny tsy fampidirany ny fampirimana na ny lahatahiry marina
Miaraka amin'ny tsipika voalohany dia mankany amin'ny lahatahiry Downloads, miaraka amin'ny «ls» faharoa dia manisy lisitra ireo fisie misy ary mba hahitantsika ny anaran'ny .sh ary amin'ny fahatelo ampiharantsika ny .sh izay lazainay fa toy ny Windows .exe.
Ary hanomboka hihazakazaka izany. Ekeo ny fehezan-dalàna momba ny lozisialy ary hanontany anao izy avy eo raha te-hametraka Visual Code Studio ianao. Eny hoy aho.
Dingana aorian'ny fametrahana Anaconda
Mila miala amin'ity fivarotana terminal ity ianao mba hiasa ny fanovana. Noho izany dia manidy ny terminal izahay, manokatra ary manoratra
Ity dia hanokatra sehatr'asa miaraka amin'ny endrika mpitety tranonkala ahafahantsika mametraka sy mampihetsika fonosana samihafa, na dia afaka manao ny zava-drehetra avy amin'ny console aza izahay.
Raha vao apetraka dia hojerentsika raha marina ny zava-drehetra. noho izany dia ho hitantsika izay kinova napetraka
Raha tsara ny zava-drehetra dia hamerina antsika ho ambony toy ny conda 4.6.4 Raha misy lesoka miseho dia tsy maintsy ho hitantsika izay lazainy amintsika hamahana azy io, hamerina azy io sns.
Raha vao nametraka ianao dia tokony ho hitanao raha misy fanavaozana ao amin'ny conda
Mampitaha ny kinova ananantsika amin'ilay misy izany ary raha misy zava-baovao dia hanontany anay izy
Nametraka «sy» ny eny isika ary niditra
Mamorona tontolon'ny asa virtoaly miaraka amin'i Conda
Ny tetik'asa tsirairay izay ataontsika dia azontsika atao amin'ny tontolo mitokana, amin'izany fomba izany no hialantsika olana amin'ny fiankinan-doha amin'ny fonosana, sns.
Mba hamoronana tontolo virtoaly dia hiantsoantsika azy isika mpampitaha manoratra ao amin'ny terminal izahay:
izay mpampitaha no anaran'ny tontolo virtoaly ary python = 3.7 no fonosana tadiavinay hapetrany.
Mampihetsika azy amin'ny
Ary tsy mandeha izahay
Manamarina tontolo virtoaly izahay amin'ny
Ity dia hampiseho amintsika ireo tontolo iainana ananantsika, hamerina zavatra toa izany izy
faka ny fotony ary asehon'ny asterisk amintsika ilay ampiasaintsika.
Misy zavatra iray ihany koa manamarika. Rehefa manetsika tontolo iainana ao amin'ny console, ny anarana dia voaomana ao anaty fononteny amin'ny mailaka, mba hahafantarantsika amin'ny toerana rehetra misy antsika
Baiko mahaliana kokoa:
afaka mikaroka rindranasa hapetraka izahay. Alao an-tsaina hoe te-hametraka Keras aho, satria jereko aloha raha misy ilay rindranasa sy izay kinova misy ao
Raha ny fahitako azy dia efa dingana ny fametrahana azy
Ary hahita ny zava-drehetra napetrakay amin'ny tontolon'ny fampandrosoana hampiasainay
Tantano fonosana pkgs misy conda
Ireto misy safidy mahaliana vitsivitsy. Izany dia hanampy antsika hanamboatra ny tontolo iainantsika virtoaly amin'ireo rindranasa tokony hiasa.
Misy baiko manokana manokana. Mametraka fonosana amin'ny tontolo manokana. Ohatra Keras, ao amin'ny tontolo iainako vao noforonina mpampitaha
Raha tsy ampidirintsika ilay mpampitaha anarana – dia hametraka izany amin'ny tontolo iasantsika amin'izao fotoana izao.
Afaka mametraka fonosana marobe miaraka amin'izay isika (keras sy scrappy) miaraka
Saingy tsy ampirisihina hialana amin'ny olana miankina amin'ny fiankinan-doha.
Ary farany, afaka misafidy ilay kinova manokana tiantsika hapetraka isika raha liana amin'ny antony rehetra
Mametraha fonosana tsy misy Conda
Amin'ity tranga ity dia hampiasa pip isika
Misy safidy isan-karazany. Vaovao farany fonosana manokana miaraka amin'ny
Vaovao farany python
Vaovao farany conda
Ary hanavao ny fonosan'ny meta Anaconda iray manontolo
Fafao ny fonosana
Fafao fonosana ao anaty tontolo iainana. Ohatra Keras avy amin'ny tontolo iainana mpampitaha
Raha te-hamafa ny tontolo iainana misy antsika isika
Fonosana marobe no azo esorina miaraka amin'izay
Ary atoro anao hizaha ireo fonosana hahitana raha efa nesorina tsara izy io
Ho ahy dia izao no fototra, raha te-hidina lalindalina kokoa ianao eto dia manana ny boky torolàlana ofisialy (amin'ny teny anglisy)
Niala izahay a taratasy hosoka nataon'i Conda ofisialy, miaraka amin'ny baiko lehibe amin'ny fampiasana haingana ny fizarana.
Fitsangatsanganana an-tsary ny tontolon'ny sary Anaconda
Izany rehetra izany dia ataontsika amin'ny terminal ary azontsika atao amin'ny sary miaraka amin'ny interface Anaconda.
Mba hanombohana ny fizarana voalohany dia tsy maintsy manana ny tontolo iainana fototra (faka) conda miasa isika
Ary amin'izany dia afaka miantso Anaconda isika. Raha tsy izany dia tsy hanomboka izany
Hitanareo, eto no ahitantsika ny tetikasa fototra, izay faka ary avy eo ny tontolo izay noforoninao ary izay tamiko. mpampitaha.
Ny tsara indrindra dia ny mijery azy amin'ny horonan-tsary
Ary miaraka amin'ny fahalalana azo nandritra ny lahatsoratra dia afaka manomboka mihodina sy mitambatra amin'ny tranomboky sy rindranasa maro isika.
Raha manana fanontaniana ianao dia mametraha hevitra ary hiezaka hanampy anao aho
Sokajy Linux, Machine Learning, Software Ticket navigation
2 Ahoana ny fametrahana Anaconda amin'ny Ubuntu
3 Dingana aorian'ny fametrahana Anaconda
4 Mamorona tontolon'ny asa virtoaly miaraka amin'i Conda
5 Tantano fonosana pkgs misy conda
5.1 Ampidiro fonosana
5.2 Mametraha fonosana tsy misy Conda
5.3 Fonosana fanavaozana
5.4 Fafao ny fonosana
6 Fitsangatsanganana an-tsary ny tontolon'ny sary Anaconda